အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများတွင် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး ကူးစက်မှု အများဆုံးမှာ မြန်မာနိုင်ငံဖြ? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများတွင် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီရောဂါပိုးကူးစက်မှု အများဆုံးအဆင့်(၄)နေရာတွင် ရပ်တည်နေပြီး လူနေထူထပ်သော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသည် ကူးစက်မှုခံရမှု အများဆုံးနေရာဖြစ်နေ၍ အထူးစီမံချက်ရေးဆွဲ တိုက်ဖျက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါအကြောင်းကို ဒီဇင် ဘာ၁ရက်တွင် ပြည်သူ့ရင်ပြင်၌ပြု လုပ်သော ကမ္ဘာ့ခုခံအားကျဆင်းမှု ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ WORLD AIDS DAY 2018 အထိမ်း အမှတ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှ သိရခြင်း ဖြစ်သည်။
WORLD AIDS DAY 2018 ဖွင့်ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုငြိမ်း ချမ်းရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်းက ”ဦးတည်အုပ်စုတွေ ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားချင်းလိင်တူဆက် ဆံတဲ့သူတွေ၊ အမျိုးသမီးလိင်လုပ် သားတွေနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအကြော ထဲထိုးသွင်းတဲ့သူများဟာ အိတ်ခ်ျ အိုင်ဗွီ ကူးစက်နှုန်းများနေဆဲဖြစ်ပါ တယ်။၂ဝ၁၇ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက် အရ မြန်မာနိုင်ငံဟာဆိုရင် အရှေ့ တောင်အာရှ၁၂နိုင်ငံမှာ အဆင့်(၄) ကူးစက်ခံရမှု အများဆုံးရှိသောနိုင်ငံ အဖြစ် ရပ်တည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီဖြစ်ပွားမှု အများဆုံး ဒေသတွေကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည် နယ်မြောက်ပိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာ အများဆုံး တွေ့ရှိရပါတယ်”ဟု ပြောသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီကူးစက်နှုန်း ၂၆ရာခိုင် နှုန်းဖြင့်ကူးစက်ခံရမှု အများဆုံးဖြစ် နေသောကြောင့် စီမံချက်များရေးဆွဲ တိုက်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိ ရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနိုင်ငံလင်း က ”ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်တိုင်းမှာ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး ကူးစက်မှုနှုန်းဟာ ၂၆ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး ကူးစက်မှုအများ ဆုံးဆိုတာကို တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ လိင်တူဆက်ဆံသူများ၊ လိင်လုပ် သားများရဲ့ အမျိုးသားလိင်ဆက်ဆံ ဖော်များနဲ့ အမျိုးသမီးလိင်လုပ်သား များတွင် ကူးစက်မှုအများဆုံးကိုတွေ့ ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများအနေ ဖြင့် မြို့နယ်အားလုံးမှာအရှိန်အဟုန် မြှင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ မိခင် မှကလေးကိုပိုးကူးစက်မှု ကာကွယ် ရေးလုပ်ငန်းများကို မြို့နယ်အားလုံး နဲ့ ဆေးရုံကြီးကိုးခုမှာ အထူးဆောင် ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ART စင်တာ ၂၁ခုနဲ့ ဆင့်ပွားကုသပေးဌာန စင် ထရယ်လိုက်ဆိုက်၃၂ခုမှာ ဆောင် ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ၂ဝ၁၇မှာ လူနာပေါင်း ၅၂ဝဝဝကျော်ကို ကုသ ပေးခဲ့ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးစွဲနေသူ တွေကို မက်သဒုန်း တိုက်ကျွေးခဲ့ပါ တယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီနဲ့ တီဘီတွဲဖြစ်နေတဲ့သူ သုံးပုံတစ်ပုံရှိပါတယ်။ မကြာသေးမီ က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာဆောင် ရွက်ခဲ့တဲ့ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီကာကွယ် တားဆီးရေးနဲ့ ကုသရေးလုပ်ငန်းများ ကို အရှိန်အဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွား ရန်ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း စတဲ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို နှီး နွယ်ဌာနများ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း များ အမျိုးသားခုခံကျကာလသား ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာနမှ တာဝန် ရှိသူများနဲ့ကျင်းပပြီး ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွက် အထူးစီမံချက် ရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် တော့မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးကိုယ်စား ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြလေးစိန်ကလည်း သဝဏ်လွှာဖတ်ကြားရာတွင် မြန်မာ နိုင်ငံတွင် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ/အေအိုင် ဒီအက်စ်ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရသူ နှစ်သိန်းနှစ်သောင်းခုနစ်ထောင်ရှိ ကြောင်း၊ ၂ဝ၁၇ခုနှစ်တွင် အသစ်ကူး စက်ခံရသူ တစ်သောင်းခုနစ်ထောင် ကျော်ရှိကြောင်း၊ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ အတွက် ဆေးဝယ်ယူရန်နှင့်မက်သ ဒုန်းဝယ်ယူရန်အတွက် ကန်ဒေါ်လာ ၁၄သန်းနှင့် ဒေါ်လာတစ်သန်းကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီး ဌာနမှ ရန်ပုံငွေချပေးထားကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အလာစကာ၌ ပြင်းအား ၇ ဒသမ သုည ရှိသော အင်အားပြင်း ငလျင်လှုပ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု မသိရှိရသေး
ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် လူနှစ်ဦးကို ကျပ် ၂ ဘီလီယံကျော် တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူ ဖ??
ထီစာအုပ် ဝယ်ရန် ပျက်ကွက်သူများထံမှ Deposit ငွေသိမ်းယူ၊ ထီစာအုပ်ရိုက်ခ မရှုံး